Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Misy mikendry ady an-trano eto !
INTY SY NDAY : Misy mikendry ady an-trano eto !
Avo avo lenta ny fifanoherana politika mitranga amin’izao fotoana. Raha jerena amin’ny fiainana andavanandro eny anivon’ny fiaraha-monina eny dia toa milamina ary toa manjaka ny fitoniana politika. Ny fanehoan-kevitra etsy sy eroa ve moa tsy hitranga satria miaina ny firenena? Izany hoe velona, ka tsy maintsy misy izay fanehoan-kevitra izay.
Na izany na tsy izany, raha ny ady hevitra politika sy toekarena ary sosialy mbamin’ny kolotsaina sy fanatanjahantena any amin’ny “efitrano mihaja” (salon) isan-tokony any no zohiana dia mafana ny ady hevitra politika miharo fifanoherana. Tsy azo hamaivanina na tsinontsinoavina izany ka mila mitandrina ny rehetra.
Ny zavatra iray isan’ny ahiana mafy amin’izao fotoana dia ny fipoahana ara-tsosialy. Efa azo an-tsaina izany tamin’ireny famelezan’ny aretina coronavirus ireny ny firenena maro, ary isan’izany isika. Niteraka olana ara-tsosialy goavana mantsy izy iny satria nampikatso ny tontolom-pihariana tamin’ny ankapobeny.
Tsikaritry ny sokajin’olona sasany fa tsy hahiana ny ho ako ara-tsosialin’izany aretina izany eto amintsika satria hoe mba afaka nihodina ihany, na tamin’ny ampahany aza ny tontolom-pihariana teto, ary nisy ihany ny araton’aina (filet de securité) nataon’ny fanjakana, ka somary nalefadefaka ny vaikan’ilay aretina, dia misy tetika maloto vitsivitsy maromaro miseho lany any ambadaika rehetra any. Ny isan’ny iray izay kendren’ny olona sasany izao dia ny ady an-trano eto. Io ady an-trano io dia tsy voatery ho adim-poko ary tsy voatery ny olona ivelan’ny fitondrana no hahazo tombontsoa aminy fa na ny ao anatin’ny fitondrana na mpiara-dia amin’ny fitondrana koa aza.
Manamarika izany izahay satria afaka tapa-bolana eo dia higadona ny tsingerin-taona faha-26 nahamay an’Anatirova eto Antananarivo. Ny talata teo dia ny Rovan’Ambohidratrimo no notandindonin-doza satria ny hazo sy bozaka tamin’ny manodidina ny Rova no may. Asa aloha na nisy finiavana handoro na afo tsy nahy fa may aloha izany. Toa tsy nisy nihevitra hafa firy. Omaly alarobia indray dia ny manodidina ny Rovan’Ilafy eny Avaradrano no may. Mbola hoheverina ho zava-maivana ihany ve? Ny mpanara-maso sasany anefa dia efa manahy fa ahiana ho tonga eny amin’ny Rovan’Ambohimanga sy eny amin’ny Rovan’Ambohitrabiby izany “afo hafahafa” izany. Hatrany amin’ny Rovan’i Tsinjoarivo Antanifotsy no efa nahataitra ny mponina sy ny tompon’andraikitra omaly tolakandro.
Dia sanatriavina ve hohamaivanina izany tranga izany? Minomino foana ve izahay raha manipika fa ahiana ny hivadihan’izany ho raharaha hanahirana raha tsy mitandrina isika mianakavy? Ilay isika mianakavy dia ny Malagasy tsy misy ankanavaka. Tsorina koa anefa fa iantsorohan’andraikitra mavesatra kokoa mba hiarovana ny firenena tsy hikorontana na tsy hifandrafy ny mpitondra fanjakana. Ny dikan’izany, ho anareo mpitondra, ento amin’ny rariny sy ny hitsiny ny firenena fa aza omena vahana ny tetika hikendrena ady an-trano eto.